ThutaSone - Page 565 of 720 - Media and Entertainment
၁၀ ပေါင်နဲ့ ဝယ်ခဲ့တဲ့ လက်စွပ်ရဲ့ တန်ဖိုးမှန်ကို နှစ် ၃၀ ကျော်ကြာမှ သိလိုက်ရသောအခါ
February 5, 2019 ThutaSone 0
လန်ဒန် မှာ မကြာသေးခင်ကမှ နာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုအကြောင်းပါ။ Debra Goddard အမည်ရှိတဲ့ ၅၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လက်စွပ်လေးတစ်ကွင်းကို ပေါချောင်ကောင်း ဈေးနဲ့ ဝယ်ခဲ့မိပါတယ်။ ၁၀ ပေါင်နဲ့ ပေးဝယ်ခဲ့တာပါ။ ယ ခုနှစ်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့ […]
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ အားလုံးက ချစ်ကြသလို မကြာသေးခင်ကမှ Pride of Myanmar Award ဆိုကို ရရှိခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦးတစ်ယောက် လတ်တလောမှာတော့ တရားရိပ်မှာ ဆရာလေး နန္ဒဒဿနညာဏီ အဖြစ် ခိုလှုံနေပါတယ်။ သာသနာ့ဘောင် ကို ၀င်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း မှာ ယခင်ကဦထက် ပိုမို နူးညံ့သိမ်မွေ့လာတဲ့ နေခြည်ဦးတစ်ယောက်ကတော့ […]
ဇွဲကပင်​​တောင်​ထိပ်​​ပေါ် သို့ လုပ်​အား ဒါန အလှူ​ လုပ်ကြတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားကြီးများ
ဇွဲက ပင်တောင်ထိပ်ပေါ်ရှိ ရင်ပြင် တိုးချဲ့ ရာတွင် လိုအပ် နေတဲ့ သဲတွေကို… ပေ ၂၇၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုထမ်းတင် ပြီး လုပ်အားဒါန ပြုနေတာပါ….။သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ပါတယ်….။ မည်သူမဆို လုပ်အားဒါနပေးလှုလို့် ရပါတယ်။ Photo-ဦနန္ဒိယ(ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကျောင်းဆရာတော်) Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဇှဲက ပငျတောငျထိပျပျေါရှိ […]
အချစ်စစ်မှာ ဘယ်အရာမှ အတားအဆီးနဲ့ပိတ်ပင်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အချစ်တစ်ခုကို ချစ်ကြတဲ့အချိန်မှာလည်း အပေါ်ယံအလှတရားတွေဟာ မလိုအပ်မှန်း နာမည်ကြီး ဆယ်လီစုံတွဲတချို့ကို ကြည့်ရင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်နော်။ အပေါ်ယံအလှတရားတွေဟာ ခဏတာအတွက်သာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှု ၊ သစ္စာရှိမှုတွေကသာလျှင် ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ ကောင်းကောင်းအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း အချစ်စစ်တစ်ခုကြောင့် အပေါ်ယံအလှတရားကိုလျစ်လျူရှုပြီး […]
လစာ အဆမတန်​ တိုး​ပေးတဲ့ သူဋ္ဌေးကို ကားသစ်ပြန်ဝယ်ပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းများ
လစာ အဆမတန်​ တိုး​ပေးတဲ့ သူဋ္ဌေးကို ကားသစ်ပြန်ဝယ်ပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းများ လစာ အဆမတန်တိုးပေးသည့် ကုမ္ပဏီသူဌေးအတွက် ဝန်ထမ်းများကကားသစ်တစ်စီး ဝယ်ပေးလိုက်ကြောင်း အေပီသတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Gravity Payments ကုမ္ပဏီသူဌေး ဒန်ပရိုက်စ်က ၎င်းလက်ဆောင်ရသည့်အကြောင်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆီယက်တမ်တိုင်းစ်သတင်းကိုကိုးကားကာ အေပီကဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ “ဝန်ထမ်းတွေက ခြောက်လလုံးလုံး ပိုက်ဆံစုပြီး ကျွန်တော် […]
၀ါဂွမ်းစများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကြက်သားမျှင်ထုတ်များကို လားရှိုးမြို့တွင် တွေ့ရှိရ၍ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် ဈေးကွက်များအတွင်း၌ ၀ါဂွမ်းစများ အသုံပြုကာ ပြုလုပ်ထားသော ကြက်သားမျှင်များကို တွေ့ရှိရ၍ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီတို့ ပူးပေါင်းကာ မြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်း […]
ဒီကနေ့ ဒုတိယမြောက်ရုံးချိန်းတက်လာတဲ့ သင်းသင်းရဲ့ ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့်တရားစွာခံထားရတဲ့ ဝေဠုကျော်
ကာမလိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ(၄၁၇)နဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ဟာ ဒီနေ့(ဖေဖော်ဝါရီ၅ရက်) မှာ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးချိန်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အလှမယ် သင်းသင်းဟာ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကို ကာမလိမ်လည်ရယူမ ပုဒ်မ(၄၁၇)နဲ့ ဇန်နဝါရီ (၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဦးတိုက်လျှောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
မိုးအောင်ရင်ရဲ့အယူခံ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့ အပြီးသတ်ကြားနာမည်
မိုးအောင်ရင်ရဲ့အယူခံ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့ အပြီးသတ်ကြားနာမည် မိုးအောင်ရင်ရဲ့ အမှုအတွက် အယူခံဝင်မှုကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ(၈) ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်ကြားနာသွားမည် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ သုံးစွဲမှုတွေနဲ့ ထောင်ဒဏ်(၁၇)နှစ် ချမှတ်ခြင်း ခံထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်ဟာ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ(၂၇) ရက်နေ့က ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ […]
မန်​မာ့ သနပ်​ခါး​နေ့အထိမ်းအမှတ်​ကြော်​ညာ ဓာတ်​ပုံ ရိုက်​ကူးနေတဲ့ ဆံရစ်ဝိုင်းလေးနဲ့ ရွှေဘိုသူလေး သူမရဲ့ နာမည်ကတော့ မခင်​မျိုးဦး ဖြစ်ပါတယ်. . . .ဆံရစ်ဝိုင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုးသားလှတဲ့ ရွှေဘိုသူလေးပါ။ သူမကတော့ မြန့်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းပြီး ရိုးးရိုးယဉ်ယဉ်ဝတ်ဆင်ကာ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အထိ ဆံရစ်ဝိုင်းလေးနဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့လို့ နာမည်ကြီးနေသူလေးပါ. […]
ဗွီဒီယိုဖိုင် ကြည့်လို့ရပါပြီ..။ ဇေရဲထက် နဲ့ ပန်းတနော်သူလေး တို့ရဲ့ ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းလေးတွေပါ။
ပန်းတနော်သူ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေတဲ့ မောင်နှမအရင်းတွေ ပြန်တွေ့ကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ.. ဖေ့စ်ဘွက်လူမှုကွန်ယက်မှာပျံနှံ့ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဇေရဲထက် နဲ့တွေ့ဆုံချင်တဲ့ ပန်းတနော်သူ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုးစန္ဒာထွန်းကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ မင်းသား ဇေရဲထက်ကသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကလေးမလေးရဲ့ ဇေရဲထက်နဲ့ တွေ့ဆုံချင်တဲ့အကြောင်းကို အလှဖန်တီးရှင်တိုးတိုးဦး နဲ့မိတ်ကပ်ပညာရှင် […]
« 1 … 564 565 566 … 720 »